होली : सप्तरंगी पर्व - Dharahara Online
होली : सप्तरंगी पर्व
होली मनाउने मुडमा हुनुहुन्छ ? निश्चय पनि बर्षदिनमा एकपटक रंगहरुको उत्सव मनाउने मौका उम्कन दिने पक्षमा हुनुहुन्न । त्यसो हो भने, कसरी होली मनाउँदै हुनुहुन्छ त ? तपाईं वेपर्वाहसँग भन्नुहोला, ‘विगतमा जसरी मनाइएको थियो, ठिक त्यसैगरी । अविर दल्ने, लोला छ्याप्ने । थोरबहुत नसालु पेय पिउने । विन्दास रंगहरुमा रमाउने ।’
अब तपाईंसँग अर्को प्रश्नको पनि जवाफ हुनुपर्छ । होली किन मनाउँदै हुनुहुन्छ ? यसको रेडिमेड जवाफ यस्तो हुनसक्छ, ‘चाडपर्व, संस्कृति हो । त्यसैलाई निरन्तरता दिनका लागि ।’ अर्थात तपाईंले होली मनाउनुको ध्येय परम्पराको निरन्तता हो । कुनैपनि पर्व, उत्सव किन र कसरी मनाउने भन्ने कुरा तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत रुचीको विषय हुन् । यसमा कुनै सर्तहरु लागु हुनेछैन । यद्यपी यी चाडपर्वको मर्म, महत्व र महिमालाई बुझ्नुभयो भने तपाईंले थप आनन्दाभूत गर्नुहुनेछ । यो पर्व किन मनाउने त ? मूल प्रश्न यही हो । यससँगै होली कसरी मनाउने भन्ने उत्सुकता पनि जाग्नसक्छ ।
होलीको परम्परा र संस्कृतिबारे हामीले धेरै पटक चर्चा गरिसकेका छौं । यसको आफ्नै धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व एवं मूल्य छन् । यद्यपी यसपटक भने हामी होलीलाई वर्तमान युग अनुसार र वर्तमान जीवनशैली अनुसार कसरी मनाउने भन्नेमा केन्दि्रत रहेर चर्चा गरौं ।
किन मनाउने ?
होली खासमा सप्तरंगी पर्व हो । यसको संकेत हो, जीवन पनि सप्तरंगी हुनुपर्छ । उत्साह र उमंगमय हुनुपर्छ । अहिले हामी धपेडीमा छौं । हामी विहान उठेदेखि जिन्दगीको रेसमा यसरी दौडिरहेका छौ कि, आफैलाई बिर्सिएर वेग मार्दैछौ । करियर, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा, वैंक व्यालेन्स, ऐश-आरमको चक्करमा हामीले आफ्नो जीवन-अस्तित्व मेटाउँदै गएका छौं । जीवन के हो ? कसरी जिउने ? यी हाम्रा प्राथमिकताबाट हट्दैछन् । यसको साइड इफेक्ट के भने, हामी तनावग्रस्त हुँदैछौं ।
हामी दिमागमा प्रतिस्पर्धा, धपेडी, तनाव, इष्र्या बोकेर वेग हानिरहेका छौं । यहि कारण त हामीलाई विहान खानेबेला, राती सुत्नेबेला औषधीको डोज लिनुपर्छ । वर्तमानमा हामी आफैलाई भुलेर जीवनबाट विमुख हुँदैछौं । यही कारण हाम्रो जीवन निरास एवं उदास हुँदैछ । फिका र श्यामश्वेत हुँदैछ ।
यस्तो अवस्थामा जीवनलाई कसरी रंगीन बनाउने, कसरी रसपूर्ण बनाउने, कसरी रोमान्टिक बनाउने, कसरी रहरलाग्दो बनाउने ? यसको जवाफ हाम्रा चाडपर्व एवं उत्सवहरुसँग छ । वास्तवमा चाडपर्वको ध्येय भनेको समाजमा सद्भाव कायम राख्न, मानिसलाई उमंगित बनाउनकै लागि हो । यी चाडपर्वले हामीलाई उदासीबाट मुक्ति दिलाउँछ । एक्लोपनबाट मुक्ति दिलाउँछ ।
होली त्यस्तै पर्व हो, जसले हामीलाई उमंगमय जीवनमा फर्काउँछ । होली रंगहरुको पर्व हो । यस अवसरमा एकअर्कालाई रंग एवं अबिर दलेर यो पर्व मनाइन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने, जीवन पनि यी रंगहरु जस्तै रंगीन हुनुपर्छ ।
कुनैपनि चाडपर्वले निश्चित मौसम, हावापानी, भूगोललाई इंगित गर्छ । रंगहरुको यो पर्व त्यहीबेला आउँछ, जतिबेला प्रकृतिमा हरियाली छाउन थाल्छ । यसअघि जाडो याम हुन्छ । प्रकृति पनि रुखो एवं सुख्खा हुन्छ । रुख-बुट्यानको पात झरेर उजाड हुन्छ । वायुमण्डलमा चिसो र सुख्खा हावा चलिरहेको हुन्छ । यो मौसमी अवस्थासँग हाम्रो शरीर र मनको खास कनेक्सन हुन्छ । त्यही कारण त जाडो याममा धेरैजसो चिन्ता एवं डिप्रेसनको रोगी बढ्ने चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
प्रकृतिको यो स्वरुप फेरिदै गर्दा होली पर्व आउँछ । अर्थात जाडो सकिएर गर्मी बढ्न थालेपछि । आकास खुल्छ । यतिबेला विस्तारै प्रकृतिमा हरियाली छाउन थाल्छ । वायुमण्डलमा सितल हावा वहन थाल्छ । रुख-बुट्यानले पालुवा फेर्न थाल्छ । रंग बिरंगी फूलहरु हावामा तैरिन थाल्छन् । यस्तो मोहक मौसममा मन पनि यसै फुरुंग हुन्छ । अतः प्रकृतिको यो सप्तरंगी पृष्टभूमीमा हामी किन रंगीन नहुने ? हामी किन उमंगित नहुने ?
भनिन्छ नि, हामीले सधै प्रकृतिसँग लय मिलाउनुपर्छ । प्रकृतिसँगै नाच्नुपर्छ र प्रकृतिकै धुन अलाप्नुपर्छ । जब हामी प्रकृतिसँग एकाकार हुन्छौं, जीवनको धुन फेला पार्छौं । जीवनको माधुर्य प्रतिध्वनीत भएको अनुभूत गर्छौं ।होलीमा रंगहरुको पर्व मनाउनुको ध्येय हो, जीवनलाई सप्तरंगी बनाउनुपर्छ ।
कसरी मनाउने ?
अँ तपाईं होली कसरी मनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? संभवत रंग एवं अबिर ल्याउनुहुन्छ । पानी, पिचकरी र लोलाको व्यवस्था गर्नुहुन्छ । पानी छ्याप्नुहुन्छ । रंग दल्नुहुन्छ । लोला हान्नुहुन्छ ।अझ तपाईं किशोरवय वा युवाअवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईंले अनेक किसिमको रसायनले आफुलाई रंगाउनुहुनेछ । बेपरवाह बाटोमा हिँड्नेलाई वा आफुले देखे जतिलाई लोला हान्नुहुनेछ । मौका परे पानीले निथु्रक्क भिजाइदिनुहुनेछ ।
शरीरभर रंग दलेर, कपाल र अनुहारलाई बहुरंगी बनाएर सडकमा जत्था बनाएर हिँड्नुहुनेछ । वाइकमा विन्दास हुँइकनुहुनेछ । वा छतमा बसेर लुकीलुकी बटुवालाई पानी छ्याप्नुहुनेछ ।अब सोच्नुहोस् त, के तपाईंले होली खेल्नुभयो ? कि अरुलाई सताएर त्यसबाट भद्दा मनोरञ्जन लिनुभयो ?
होलीको मर्म, महिमा, महत्व र मूल्य एकातिर छ । तर, हामी होलीलाई भद्दा मजाक बनाइरहेका छौं । अतः होलीबाट हामीले असली उमंग लिन जानेकै छैनौ । त्यसो भए कसरी खेल्ने त होली ? हरेक चाड पर्व आपसी सद्भाव, सौहार्द्धता फैलाउने एवं कायम राख्ने मेलो पनि हो । हामीले यस्ता चाडपर्व मनाइरहँदा आफुले मात्र आनन्द लिएर हुँदैन, अरुलाई आनन्दित तुल्याउनु पनि पर्छ । यसर्थ रंगहरुको उत्सव मनाइरहँदा अरुलाई दुःख, कष्ट दिने होइन, आपसी खुसी साट्ने हो ।
होलीको पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ । यसका लागि आफन्त, साथीभाई, चिनेजानेका, सहकर्मी आदिलाई आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । होली पर्व मनाउनका लागि कुनै निश्चित ठाउँ तोक्न सकिन्छ । जस्तो घरको छत, आँगन वा खुला ठाउँ । जहाँ आफुलाई अनुकुल, सुरक्षित र सहज हुन्छ ।
होली खेल्नुपूर्व कस्तो रंग प्रयोग गर्ने ? कस्तो पहिरन लगाउने ? सुरक्षाको के कस्ता विधी अपनाउने ? कहाँ खेल्ने ? कोसँग खेल्ने ? कसरी खेल्ने ? मोटामोटी खाका तयार गर्न सकिन्छ ।अक्सर आफ्नै घरपरिवार, नातेदार, साथीभाईवीच अबिर दलेर होली खेल्ने गरिन्छ । होली खेल्दा पुराना एवं उज्यालो रंगको पहिरन लगाउने गरिन्छ । कपाल, अनुहारको छाला आदिमा रंगको असर हुनसक्ने भएकाले हेयर आयल, जेल, क्रिम आदि प्रयोग गरिन्छ ।
खासगरी होली होलीका लागि अबिर प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ । अझ संभव भएसम्म त प्राकृतिक रंग, जस्तो कि, फूल, पात आदिको रंग, चन्दन आदिको रंग बनाएर होली खेल्ने गरिन्छ । यस किसिमको रंग छालामैत्री हुन्छ । होली खेल्दा मिठोमसिनो खानेकुरा, संगीत आदिको पनि व्यवस्था गरिन्छ । साथै होली खेलिसकेपछि सरसफाईका लागि पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।रंगहरुको पर्व मनाउने आ-आफ्नै तौर तरिका, शैली हुनसक्छ । यद्यपी यसले कसैलाई हानी गर्नु, दुःख दिनु भनेको यस पर्वको वास्तविक मर्मलाई नबुझ्नु हो ।
सत्यको जीतमा उल्लास
होली एक पौराणिक पात्रको विजयी उत्सव हो, हामीले कण्ठ गरेको कुरा । हिरण्यकश्यपुले आफ्ना छोरो प्रल्हादलाई मार्नका लागि अग्निकुण्डमा हालेर जलाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले आफ्नी बहिनी होलिकाको काखमा प्रल्हादलाई राखिन्छ र अग्निकुण्डमा राखिन्छ । होलिका आगोले जलेर भष्म हुन्छन्, प्रल्हादलाई केही हुँदैन ।
खासमा प्रल्हादले विष्णु भगवानको आरधाना गरेको उनको पिता हिरण्यकश्यपुलाई मन पर्दैन । त्यही कारण उनले छोरोलाई जलाएर नष्ट गर्ने योजना बनाएका हुन्छन् । तर, उनी अधर्म र असत्य पराजित हुन्छ । यसरी असत्यमाथि सत्यको जीत भएको खुसीमा पनि यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।
होलीका लागि प्राकृतिक रंग
होलीका लागि आवश्यक सामग्री के होला त ? यसका लागि समेकसम्म प्राकृतिक रंगको व्यवस्था गरौं । फूल, पात आदिको रसबाट । चन्दन, बेसार आदिको पनि प्रयोग गरिन्छ । खेल्नुअघि सफा पानीको व्यवस्था गरौं ।
१. रातो चन्दनको लेप -यसलाई अबिर जस्तै वनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै चन्दनको लेपले छालामा राम्रो प्रभाव पार्छ । दुइ चम्चा चन्दनको लेपलाई पाँच लिटर पानीमा उमाल्नुपर्छ । अतः यसलाई थप २० लिटर पानीमा मिसाएर रंग वनाउन सकिन्छ ।
२. आधा कप पानीमा दुइ चम्चा बेसार राखेर थोरै चुना मिसाउनुपर्छ । त्यसमा एक लिटर पानी हालेर घोलौं । उक्त रंगीन पानी पनि होलीका लागि उपयोगी हुन्छ ।
३. संभव भए टमटर र गाजरको रसमा पानी मिसाएर रंग तयार गर्न सकिन्छ ।
४. धनियाँ र पुदिनाको पेस्टलाई पानीमा मिसाएर पनि रंग वनाउन सकिन्छ ।
साथै अबिरले पनि होली खेलिन्छ । अबिरले स्वास्थ्यमा खास हानी गर्दैन । सुख्खा अबिर शरीरबाट सजिलै हटाउन पनि सकिन्छ ।
सुख्खा रंग हटाउने विधि
१. सुख्खा अविरले मात्र खेलिएको छ भने त्यसलाई पानीले धुनुहुन्न, कपडाले पुछ्नुपर्छ ।
२. गीलो रंगलाई तुरुन्तै पुछिदिने हो भने पनि रंग जान्छ ।
३. टाउकोमा लागेको अविरलाई काइयोले कोरिसकेपछि स्याम्पु प्रयोग गरेर नुहाउनुपर्छ ।
४. सावुन दलेर नुहाउँदा पनि अविर हटाउन सकिन्छ ।
५. कसैले अविर दल्नसाथ झट्कारेर पनि हटाउन सकिन्छ ।
रंग हटाउने विधि
१. रंग विस्तारै हटाउनुपर्छ, रगड्नु हुदैन । यसले छालामा असर गर्छ ।
२. अनुहारमा लागेको रंग हटाउन पहिलो वाफ लिनुपर्छ । यसले अनुहारको रोमछिद्र एवं प्वाल खुला हुन्छ र सजिलै रंग हटाउन सकिन्छ ।
३. वाफ लिइसकेपछि क्लिजिङ मिल्कले सफा गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसपछि फेसवास प्रयोग गरेर अनुहार पखाल्नुपर्छ ।
४. केसमा लागेको रंग हटाउन कंडिसनययुक्त माइल्ड स्याम्पु प्रयोग गर्नुवपर्छ ।
५. रंग हटाउन पेटेल स्पिरिट प्रयोग गर्नु हुन्न । त्यसले छालालाई रुखो वनाउँछ ।
१. वेसनमा कागती र दुध मिसाएर पेस्ट वनाउने, त्यसलाई छालामा लगाएर दस पन्ध्र मिनेट त्यसतीकै छाड्ने र धुने ।
२. मुलाको रस निकालेर त्यसमा दु, वेसन तथा मैदाको मिश्रण वनाउने । यस्तो मिश्रण लगाएर सफा गरेपछि छालामा चमक आउँछ ।
३. केसमा रंग भए राम्रोसँग केस झट्कार्ने । त्यसपछि वेसन तथा दहीले केस पखाल्नु पर्छ ।
४. नङमा लागेको रंग हटाउन कागती प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
रंगको रासयनिक असर
रंग केमिकल असर
कालो लेड अक्साइड किड्नी ड्यामेज
हरियो कपर सल्फेट आँखाको एलर्जी, ब्लाइन्डनेस्
वैजनी क्रोमियम आयोडाइड एलर्जी
सिल्भर एल्मुनियम व्रोमाइड क्यान्सर
निलो प्रशियन व्लू छालाको एलर्जी
रातो मर्करी सल्फेट छालाको क्यान्सर
एसियाली महिला उद्यमीहरुको सम्मेलन सम्पन्न
होलीमा कपाल जोगाउने काइदा
खोइ नेपाली संगीत ?
नेपाली चलचित्रमा मौलिकताको बहस
गीत बेचुवाहरुको नाम किटेरै बोल्ने कोही छैन, तै चुप मै...
खेलकुद विकासका लागि अत्यावश्यक तथ्यहरु
चलचित्रको साख क्षवि प्रवृत्तिको अन्त्य